Bit By Bit - Ukuqwalasela ukuziphatha - 2.4.1 izinto Ukubala
Simple ukubala bubangela umdla xa ukudibanisa umbuzo ezilungileyo data elungileyo.
Nangona ife.Elona nebonakalisa nobunzima, amaqashiso uphando loluntu ngokwenene nje ukubala izinto. Xa eneminyaka data ezinkulu, abaphandi Ungabala ngakumbi, kodwa loo nto ayithethi ukuba uphando kufuneka ingqalelo ukubala izinto ngakumbi nangakumbi. Endaweni yoko, ukuba siza kwenza uphando kakuhle data enkulu, kufuneka sizibuze: izinto Nixabiseke ubala? Oku kunokubonakala ngathi umcimbi ayinyani ngokupheleleyo, kodwa zikho ezinye iindlela jikelele.
Amaxesha amaninzi abafundi benze uphando lwabo ukubala esithi: ndiza ukubala into ekungekho namnye wakha ekuthini ngaphambili. Umzekelo, umfundi usenokuthi, abantu abaninzi baye bafunda abafuduki kwaye abantu abaninzi baye bafunda amawele, kodwa akukho mntu uye wafunda amawele kweyi. Motivation ngo ku ngabikho nto abadli kukhokelela kuphando olungileyo. Kakade ke, ukuze kubekho izizathu elungileyo ukufunda amawele kweyi, kodwa yokuba abakhange zisafundwa phambi akuthethi ukuba kufuneka ifundwe ngoku. Akukho namnye wakha ekuthini inani imisonto ekhaphethini kwi-ofisi yam, kodwa ke oko akuthethi ngokuzenzekelayo akuthethi ukuba oku kuya kuba iprojekthi yophando elungileyo. Enikwa yi ukungabikho luhlobo kufana isithi: Khangela, kukho umngxuma phaya, kwaye ndiza kusebenza nzima kakhulu ukuba wenjenjalo. Kodwa ke, asizizo zonke umngxuma ekufuneka zizaliswe.
Endaweni yokukhuthaza ngenxa yokungabikho, ndicinga ukuba ukubala ekhokelela kuphando okulungileyo kwiimeko ezimbini, xa uphando umdla okanye okubalulekileyo (okanye udalelwe zombini). Umzekelo, ukulinganisa izinga lentswela kubalulekile kuba ngawo sisalathisi kuqoqosho ebagcine izigqibo zomgaqo. Ngokuqhelekileyo, abantu nemvo omhle oko kubalulekile. Ngoko, kwi lonke eli candelo, ndiza kukunika imizekelo emithathu apho ukubala umdla. Kwimeko nganye, le abaphandi azizange ubala ngokungalungelelananga, kunokuba ke ukubala kwiimeko ezithile ukuba kutyhilwa iingqiqo ezibalulekileyo zibe iimbono ezingaphezulu ngokubanzi ngomsebenzi nendlela enkqubo zentlalo. Ngamanye amazwi, kakhulu woko kwenza ukuba le mithambo ukubala ethile umdla ayikho data ngokwalo, kuphuma ezi ngcamango jikelele.
Ngezantsi Ndiza kuzisa imizekelo emithathu: 1) ukuziphatha zomsebenzi abaqhubi beeteksi eNew York (Section 2.4.1.1), 2) ubuhlobo ukusekwa ngabafundi (Section 2.4.1.2) kunye 3) yentlalo amajelo ukuziphatha zibekw urhulumente Chinese (Icandelo 2.4.1.3). Yintoni le mizekelo ukwabelana kukuba onke abonisa ukuba ukubala iinkcukacha omkhulu kusetyenziselwa uvavanyo iingqikelelo theoretical. Kwezinye iimeko, imithombo yedatha enkulu ukwenzela ukuba uyenze le ukubalwa noko ngqo (njengoko kwimeko New York iTeksi). Kwezinye iimeko, abaphandi kuya kufuneka ukujongana kwezicelo ngokuthi kudibanisa iinkcukacha kunye operationalizing azenzele uzakufunda (njengoko kwimeko ubuhlobo ukusekwa); kwaye kwezinye iimeko abaphandi kuya kufuneka ukuqokelela idatha yabo lokuqwalasela (njengoko kwimeko eendaba ukuhluza zentlalo). Njengoko Ndiyathemba le mizekelo ibonisa, kuba abaphandi abakwaziyo ukubuza imibuzo enomdla, data enkulu kunedinga kakhulu.